नयाँ बाटो - समय-समाचार
निशान निष्कर्ष शनिबार, २०७८ भदौ ५ गते, ०१:५० मा प्रकाशित
सुरज बिहान ४ बजे नै कसैले थाहा नपाउने गरी घरबाट निस्कियो । उसको गाउँबाट नेपालको राजधानी आइपुग्न कम्तीमा ४ घण्टा लाग्थ्यो, त्यो पनि गाडीमा । गाउँबाट गाडी बिहान सात बजेमात्र निस्कन्थ्यो राजधानीतिर जान । गाडीमा चढ्न नपाउँदै कोही खोज्न त्यही गाडी छुट्ने ठाउँमा आइपुग्छन् कि भन्ने डर उसको मनमा थियो । त्यसैले ऊ गाडी छुट्ने ठाउँभन्दा केही पर खोल्सीमा आएर करिब ३ घण्टा बस्यो । गाडी आयो । सिट एउटा पनि खाली थिएन । उसले गाडी रोक्यो । भर्खर दश एघार वर्ष भएको सुरजले गाडीमा कसैले नचिने हुन्थ्यो भन्ने सोच्यो तर त्यो सम्भव थिएन । सोध्नेहरूलाई उसले काठमाडौँबाट मामाले बोलाउनु भएकाले जान लागेको भन्यो । तथापि सत्य त्यो थिएन । ऊ त पढाइ छोडेर घरबाट भागेर आएको थियो ।
करिब साँढे एघार बजेतिर गाडीले उसलाई पुरानो बसपार्कमा छाडिदियो । कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने, के खाने उसले केही सोच्न सकेन । उसले गोजी छाम्यो । उसले बाबुको गोजीबाट जम्मा ७०० रुपैँया निकालेर भागेको थियो । २५० रुपैँया त गाडीमा भाडाका लागि दिएको थियो । बाँकी ४५० ले कति नै पुग्छ र ? उसले आफ्ना आफन्त कहाँ बस्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था थिएन । ऊ पहिलोपटक काठमाडौँ आएको थियो । पाँच घण्टाको गाडीको यात्राले सुरजलाई थकाइ मात्र होइन भोक पनि लागेको थियो । कहाँ गएर के खाने उसले केही पत्तो पाएन । नजिकै ‘यहाँ मःमः पाइन्छ ।’ लेखेको थियो । तर के हो मःमः भन्ने समेत थाहा भएन उसलाई । पसलमा गएर उसले मःमः त माग्यो तर कसरी खाने भन्ने नै जानेन । एकछिन अरुले खाएको हे¥यो र उसले पनि खान थाल्यो ।
सडकमा गाडीको ताँती थियो । यस्तो ताँती त उसले गाउँमा कमिलाको मात्र देखेको थियो । ऊ सडक छेउमा केहीबेर टोलाएर बसिरह्यो । कहाँ जाने भन्ने थाहा थिएन । रत्नपार्कको वरिपरि यताउता गरेर उसले दिन बितायो । बेलुका कहाँ गएर बस्ने उसले केही सोच्नै सकेन । जेठको समय सात बज्दा रात पर्न लाग्यो । दिन जति अँध्यारो हुुँदै गयो, उसको मन त्योभन्दा कालो र निस्पट्ट हुन थाल्यो ।
उता गाउँमा बाआमा र छरछिमेकमा उसकै चिन्ता हुन थाल्यो । हिजोसम्म घरमा झगडा नभएको सुरज एक्कासि घरबाट हराउँदा कस्को मन रुन्न र ? कुपुत्र नै भए पनि सन्तानको जति माया आमालाई अरुको हुँदैन । त्यसैमाथि आजसम्म मायाले पुलपुल्याएर हुर्काएकी थिइन् सुरजकी आमाले यसलाई । दिनभरि खोजी कार्य जारी रह्यो । कसैले भीरबाट लडेर पो मरे कि भने, कसैले कोही आफन्तकोमा गयो कि भने ? आमाको मन न हो कसैले सम्झाउँदा पनि मान्दै मानेन । बेलुका सहरबाट फर्केका गोपीरामले पनि सुरज हराएको थाहा पाए । बिहान राजधानी जाँदा आफूले सुरजलाई गाडीमा देखेको र मामाले बोलाएर सहर गएको रे भन्ने कुरा भनिदिए । जिउँदै छ भन्ने त भयो तर के खायो होला ? कहाँ बस्यो होला ? उसको मामा त कोही छैन सहरमा । आमालाई फेरि अर्काे प्रकारको पीर प¥यो । भोलिपल्ट बाबु चाहिँ छोरो खोज्न सहर जाने कुरा भयो ।
सुरजलाई पनि घर छोडेकामा दुःख लाग्यो । उसले कहिल्यै सोचेको थिएन पाटीको बास होला भनेर । रात परिसकेकाले उसले कहाँ जाने र के खाने भन्ने सोच्न सकेन । पुनः त्यही मःमः पसलमा गएर एक प्लेट मःमः खायो र रत्नपार्कको पाटीमा सुत्यो । सुत्यो नि के भन्नु, पल्टियो । निद्रा लागे पो सुत्नु ? उसले आमालाई खूब सम्झियो । अर्काे मन त भन्यो, “अब कुन अनुहार लिएर जानु घर ? आमाले भे भन्नु होला ? बुबाले त पक्कै पनि पिट्नुहुन्छ । जे जस्तो भए पनि होटेलमा भाँडा माझेर भए पनि यतै काम गर्नुपर्छ । फर्केर गएँ भने त फेरि स्कुल जानुपर्छ । स्कुलमा साथीहरूले पनि जिस्क्याउँछन् । त्यसैले जान्न अब घर ।” उसको मनमा द्वन्द्व चलिरह्यो । बिहानको झिसमिसेमा आँखाहरू लोलाएछन् तर सडकको कुचीकार आएर उसलाई त्यहाँबाट उठायो । ऊ फेरि हिजो जसरी नै भौँतारिन थाल्यो ।
बिचरा बाबुले कहाँ खोज्ने त्यत्रो सहरमा । तैपनि मुटुको टुक्रा भनेको नै त्यही छोरो हो । नखोजेर पनि त भएन । बिहानै घरबाट हिँडेको सुरजको बाबु दिनभर भौँतारियो सहरको सडकमा । सुरजको केही पत्तो लागेन । बेलुका सुत्न एउटा सामान्य होटेल खोज्यो । भोलिपल्ट, पर्सिपल्ट पनि उसले छोराको खोजीमा नै समय बितायो ।
विचरा सुरज ! उसले सोचेको पनि थिएन । सहरको सडकमा यसरी भौँतारिनु छँदै थियो तर उसले पिटाइ खायो । आमाले एक थप्पडसम्म नहानेको सुरजको शरीरमा केही केटाहरूले निकै कुटपति गरे । जसले गर्दा उसको शरीरमा घाउ र निलडामहरू देखिए । यसरी उसले कुटाइ खाएको रात ऊ सहर आएको तेस्रो रात हो । ऊ सुतिरहेको थियो । एक्कासि केही सडकबालकहरू आए र भने, “ओई छोड्, यो ठाम् त हाम्रो हो । तँ को होस् ? ह्याँबाट भाग् ।” उसले सोच्यो, “सहरमा त सडक पनि सबैको नहुँदो रहेछ ।” ऊ त्यहाँबाट अलि पर आकाशे पुलको छेउमा बस्यो । भोलिपल्ट ऊ एउटा होटेलमा पुग्यो । त्यहाँ उसले भाँडा माझ्ने काम पायो ।
संयोग भन्नुपर्छ । सुरजले भाँडा माझ्न थालेको होटेलमा त उसलाई खोज्न आएको उसैको बाबु बस्दो रहेछ । बेलुका होटेलमा आइपुग्दा बाबु चाहिँ आश्चर्यमा प¥यो । शरीरमा डामहरू देखेर आफ्नै छोरा हो त भनेर एकछिन टोलायो र बिस्तारै भन्यो, “सुरज !” सुरज छाँगाबाट खसेजस्तै भयो । उसले बाबु त्यहाँ आउलान् भन्ने सोचेकै थिएन । सुरज बोल्नै सकेन । उसले त बाबुलाई डराएर एकोहोरो हेरिरह्यो । बाबुले आएर सुरजलाई काखीमा च्याप्यो । सुरुमा काठमाडौँ आउँदा त छोरालाई भेटेपछि कति गाली गरुँला भन्ने लागेको थियो सुरजका बाबुलाई । तर छोराको त्यो हविगतले उनमा गाली होइन दया पलायो । बाबुले होटेल साहूलाई सुरजको बारेमा सोध्यो । साहूले अरु केही भनेन । आजबाट मात्र काममा लागेको हो भन्यो । सुरजका बाबुले पनि साहूलाई सबै कुरा बतायो ।
सुरज त जान मानेकै थिएन तर फकाइफुल्याई सुरजलाई लिएर उसको बाबु घर गयो । घरमा आमा खूब आत्तिएर बसेकी थिइन् । उसलाई देखेर एकपटक त खुसी भइन् तर पिटाइ खाएको कुराले भने उनलाई दुःखी बनायो । जेसुकै भए पनि छोरो घर आएकामा सबै खुसी भए । गाउँलेहरूले पनि एकपटकको उरन्ठेउलो बुद्धि हो गाली गर्न हुन्न भने । ऊ पहिलेजस्तै स्कुल जान थाल्यो । साथीहरूले जिस्क्याउँदा ऊ गम्भीर हुन्थ्यो र भन्थ्यो, “तिमीहरू जे भन । मैले नयाँ जीवन पाएको छु । जति दुःख पाए पनि म पहिले पढाइलाई पूरा गर्छु । नपढेर हुँदैन । सहरमा त सडक पनि सबैको नहुँदो रहेछ ।” साथीहरू उसका कुराले जिल्ल परे । उसले सबै साथीहरूलाई आफू सहरमा पाटीमा सुतेको कुरा पनि सुनायो र पिटाइ खाएको पनि । यता आमाको मन दुखाएकामा पश्चाताप ग¥यो । त्यसपछि उसको पढाइमा पनि सुधार भयो । यसै वर्ष उसले एस. ई. ई. उत्तीर्ण गरेको छ ।
(नेपाली साहित्यमा विद्या विशारद अध्ययनरत निशान निष्कर्ष मूलतः कवि हुन् । गोरखामा जन्मिएर काठमाडौँमा अध्यापनरत उनी गीत र कथा लेखनमा समेत उत्तिकै सक्रिय छन् ।)